Goobaha Khadka Tooska ah ee Jaban ee Jaban - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka
(535 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ... Shuruucda khamaarka ee Japan waa mid aad u adag, oo hadda dhowr nooc oo khamaar ah ayaa sharci ah. Laga soo bilaabo 1907, qaababka kaliya ee khamaarka saxda ahi waxay ku sharxayaan tartanka faraska, tartanka baaskiillada, mootada iyo tartanka mootada. Ciyaaraha qaarkood sida mahjong, pachinko, iyo bingo sidoo kale waa loo ogol yahay inay lacag ku ciyaaraan, maxaa yeelay ciyaarahan waa madadaalo. Dhamaan khamaarista kale oo dhan, oo ay ku jiraan turub-ka iyo casinos-ka waa sharci darro gudaha Japan. Ciyaartoyda badanaa waxay aadaan Macau si ay ugu ciyaaraan casino halkaas.
Lotto oo ku taal Japan waxay jirtay ilaa 1630. Laakiin xitaa bingo-ka waa la mamnuucay in muddo ah, laga bilaabo 1842. Kadib, dhammaadkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka, sanadkii 1945, Bakhtiyaanasiibkii Qaranka ayaa dib loo soo celiyay. Waxaa la aaminsanaa in dakhliga ka soo gala Lotto ay gacan ka geysan doonaan dib u dhiska dalka. Markii magaalada Jabbaan dib loo soo celiyo, dawladdu waxay go'aansatay inaysan ka tanaasulin bakhtiyaanasiibka.
Sida laga soo xigtay n ka hel wararkii ugu dambeeyay khamaarka khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee Japan, biilka, oo la soo saaray bishii Abriil 2013 iyadoo ujeedkiisu yahay sharciyeynta casinos, wuxuu leeyahay taageero ballaaran oo siyaasadeed. Sharciyeynta qamaarka kubada cagta ayaa sidoo kale lagu soo daray ajandaha dowlada Japan. Iyo, ugu dambeyntii, 2016 Baarlamaanka Japan wuxuu ansixiyay sharciyeynta casinos, dhammaantoodna ma sugi karaan inay bilaabaan inay la shaqeeyaan mid ka mid ah quruumaha ugu khamaarka badan adduunka.
Iyadoo la raacayo sharciyada qamaarka internetka ee Japan, aragtida saxda ah ee ciyaartu waa bingo, iyada oo loo oggol yahay khamaarista ciyaaraha kubbadda cagta iyo sharad lagu dhigo 4 isboorti oo kala duwan. Dowlada Jabbaan ma siiso ruqsad adeegsiga goobaha khamaarka ee internetka ee wadanka. Dowlada ayaa sidoo kale dooneysay in laga mamnuuco ciyaartooyda Jabaan inay adeegsadaan goobaha khamaarka ee khadka tooska ah ee internetka. Laakiin, sida meelo badan oo adduunka ah, ciyaartoydu wali waxay ku ciyaari doonaan khadka tooska ah.
Xaqiiqda ah inay jiraan goobo khamaar khadka tooska ah looga ciyaaro oo loogu talagalay ciyaartoyda Japan, oo lagu meeleeyay dalal kale, dowladda ayaa adkeyneysa inay xakameyso muwaadiniintooda. Tani waa sababta oo ah dowladdu awood uma laha in ay xukunto goobaha ay ku taal. Ciyaartoyda Jabaan waa u xor inay isticmaalaan bogagan. Laakiin waxaa fiican inaadan ku ciyaarin meelaha caamka ah sida kafeega internetka. Taa baddalkeeda, ciyaartoydu waa inay adeegsadaan kombuyuutarkooda si ay uga galaan goobaha ciyaaraha ee internetka.
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbalaya ciyaartoy ka socota Japan, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka timaadda mashiinnada ciyaarta illaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa dib u eegistayada bogagga internetka ee khadka tooska ah, si aad uga feejignaato dhiirrigelinta khadka tooska ah ee ugu wanaagsan, gunnooyinka iyo xulashooyinka lacag bixinta ee ay heli karaan ciyaartoy ka socota Japan.
Waxaa la og yahay in Khamaarista waxaa laga mamnuucay Japan heer gobol. Waxaa jira qodob khuseeya Xeerka Ciqaabta. Laakiin isla waqtigaas Japan, waxaad ku ciyaari kartaa dhowr nooc oo qiimayaal ah (inta badan ciyaaraha isboortiga) oo aad ka qeyb gasho bakhtiyaanasiibka. Khamaarka noocan oo kale ah ee Japan waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay sarkaal sharci ah, sababtoo ah keenista lacagta si toos ah qasnadaha dowladda oo ay si adag u kormeeraan hay'ado dowladeed oo kala duwan, oo hoos imanaya xukunka sharciyada gaarka ah.
Khamaarista sharciga ah ee Jabbaan - waa Koei kyogi (barafka dadweynaha)
Waxaa jira dhowr nooc oo asaasi ah Koei kyogi . Dhexdooda: boodbood - keiba doomaha mootada - kotei , tartanka baaskiil - keirin , Tartanka mootooyinka iyo wixii lamid ah. Khamaarista isboorti ee khamaarka - waxa Jabbaanku isku maaweelin karaan iyagoon ku xadgudbin sharciyada dalkooda. Dhamaan khamaarista ayaa kontrolirliruyutsya maamulka deegaanka ee gobolka. Waa wax xiiso leh in 80% wadarta faa'iidada laga helo iibinta tikidhada dhacdooyinka isboorti iyo heerarka - tani waa uun faa iidada faa iidada laga helayo sharadka.
Tikidhada bakhtiyaa nasiibka nasiib - takarakudzi (takarakuji) badanaa waxaa lagu iibiyaa dukaamada yaryar ee magaalooyinka waaweyn, halkaas oo bakhtiyaanasiibka lagu qabto. Bakhtiyaa-nasiibka ayaa la qabtaa maalmaha qaarkood. Tikidhada bakhtiyaa nasiibka Kirismaska ​​waxaa si gaar ah loogu iibiyaa Bangiga Mizuho. Kadibna waxay faafinayaan iibiyayaal. Jumbo Nenmatsu Takarakuji (takarakudzi) ma aha nooca kaliya ee bakhtiyaa-nasiibka. Laakiin halkan abaalmarinta ugu weyn waxay noqon kartaa toban milyan oo yen ama ka badan. Si kastaba ha noqotee, sharci ahaan, 50% faa'iidooyinka laga helo bakhtiyaanasiibyada noocaas ah waxaa loo diri doonaa hay'adda samafalka iyo khasnadda dowladda. Bakhtiyaanasiibka Japan waxay noqon kartaa dhowr nooc. Asal ahaan liisankaan, dijitaalka, kala duwanaanshaha tirada iyo cayaaraha dhaqanka ee kaararka leh. Qiimaha tigidh kasta wuxuu ku dhex jiraa 100 ilaa 500 yen.
Pachinko ugu yeer ciyaarta mashiinka ciyaarta, booska loogu yeero, oo umuuqda kubbadda toosan. Marka laga reebo pachinko rasmi ahaan laguma darin khamaarka. Waxaa laga yaabaa in Jabaanku u sameeyeen sababo dhaqan ama taariikh. Hoolalka leh mashiinada pachinko oo ay maamusho hay'ado gaar ah, oo ku baahsan Japan oo dhan, iyo hoolka martida ee maalin kasta waxay noqdaan in ka badan kala badh dadweynaha iyo dalxiisayaasha.
In kulan ah pachinko waxaa lagama maarmaan ah in lagu guuleysto kubbadaha birta yar yar ee birta ah. Dhexroor kasta oo kuul sax ah 11 milimitir. Qiimaha mid ka mid ah kubadaha ku yaal Japan qiyaastii afar yen, laakiin ciyaartoydu maahan waxyaabo yaryar, badiyaa waxaa la qaataa hal kun kun. Cayaartu waxay ka kooban tahay xaqiiqda ah in iyada oo loo marayo dhammaan caqabadaha saameynaya dhabbaha kubbadaha, in kubbadaha loo diro goolka iyadoo la kaashanayo qalab gaar ah oo saameynaya xawaareygooda. Ujeedada - jeebka guuleysta ee mashiinka guddiga pachinko. Kubadaha badankood si nabadgelyo leh oo looga gudbo caqabadaha oo dhan ayaa hoos u dhacaya oo gudaha mashiinka, ciyaaryahanka ma keenayo wax gunno ah. Laakiin kubadaha qaar ayaa wali ku dhici doona jeebabka, kuwaas oo dhaqaajinaya mashiinka waxayna siineysaa abaalmarinta. Guusha - isla kubbadaha ayaa si otomaatig ah loogu shubaa haanta gaarka ah. Mar dambe, kubbadahaas waxaa lagu kala beddeli karaa xafiiska sanduuqa abaalmarinta iyo abaalmarinnada hadhow agagaarka hoolka lagu ciyaaro si qarsoodi ah lacag ayaa loogu beddelaa. Qorshahan isku dhafan ee kuwa kale, sida khalkhalgelinta xun, khiyaanada Sharciga Japan, kaas oo mamnuucay ciyaarta iyadoo lagu guuleysto. Laakiin qorshuhu wuxuu muddo dheer si guul ah uga socday waddanka oo dhan.
Pachisuro - waa nooc casri ah oo kumbuyuutar ah oo ah mashiinka caadiga ah ee pachinko. Waxay aad ugu eg yihiin mashiinnada lagu ciyaaro waddamada kale waxaana lagu qaybiyaa Japan iyo sidoo kale kuwa pachinko . Jabbaanku waxay aaminsan yihiin inay ku ciyaarayaan Pachisuro ugu fudud ee lagu guuleysto. Qalabka mashiinnada pachisuro ayaa caan ku ah xaqiiqda ah in si joogto ah loo bixiyo abaalmarinno. Xitaa haddii abaalmarin yar, isagu marwalba wuu joogaa, taasna Japan ayaa doorbidaya Pachisuro Bedelida mashiinno kale oo badan.
Japanese Yakuza, iyaguna sidoo kale waa kooxo dambiilayaal ah, waxaa ku jira xarumo sharci-darro ah oo loo yaqaan 'casinos casinos' sida khamaarka - mid ka mid ah jihooyinka ugu waaweyn ee howlahooda. Kaliya halkaas ayaa si dhab ah u ciyaaray, miisaan ballaaran iyo lacag. Marka lagu daro khamaarka dhaqameed: kaararka, roulette wuxuu u mahadcelin karaa Shiinaha Mahjong. Waxaa xusid mudan in Japan ay la shaqeyneyso ilo fara badan oo khadka tooska ah lagu ciyaaro, inkasta oo ay xaqiiq tahay in la mamnuucay. Si ka duwan waddammada, haddii aad runtii rabto, ciyaartoydu si xor ah ayey u wareegi karaan roulette-ka dalwaddii, tusaale ahaan, waxaa jira -www.igrovoyzal.com si toos ah internetka, Jabbaanku waxay qarka u saaran yihiin inay xanuunsadaan oo ay halistaada u soo baxaan.
Waqtigii ugu danbeeyay ee Japan ayaa bilaabay wadahadallo si ay u dhisaan casino dabaasha ah oo ku yaalla boorsada iyo casinjabinta joogtada ah ee goobaha damaasha. Xisbiga Soo kabashada Japan waxay soo jeedineysaa mashruuc casri ah oo lagu dalxiis tago. Mashruucu wuxuu isku dayayaa inuu hirgeliyo waqtiga loogu talagalay Ciyaaraha Olombikada ee Japan. Aasaasayaasha mashruuca ayaa ku doodaya taas sharciyeynta gundhigga meelaha loo qoondeeyay ee Japan waxay noqon doontaa tallaabo loo xaglinayo dhaqaalaha dalka. Qiyaas ahaan aagagga khamaarka waxaa xukumi doona gobolka qayb ka mid ah faa iidooyinka waxay ku shubi doonaan khasnadaha dalka.
Jabaanku waxay jecel yihiin adduunka casriga ah. Way ku faraxsan yihiin inay waqti aad u badan ku qaataan ciyaaraha kombiyuutarka, iyadoo xiisaha ay la falgalaan astaamaha astaamaha ee ciyaaraha doorka ciyaarista iyo xitaa inay qoys ka bilaabaan shabakadda. Si kastaba ha noqotee, sababo jira awgood ayaa ku baahsan madaddaalada adduunka oo dhan sida casinos online, xidid kuma noqon karo Japan.
The Japanese waa caan ku ah hamigooda, waa casaan-yareyaasha dalxiis ee yar yar ee waddanka leh taxaddar xoogaa ah, xulashada ay haystaanna waa yar tahay. Warshadaha ciyaaraha internetka ee dalka, ayaa si layaableh, wali u gaarin heerka saxda ah. Oo kanu waa sharaxaadda.
Waxyaabaha ayaa ah in meelaynta ugu horreysa ee badan ee naadiyada ciyaaraha internetka lagu arkay Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Aasiya, casinos-ka khadka tooska ah waxay ku faafeen dhawaanahan, isla mar ahaantaana, markii ay qabteen taakulayntii ugu dambeysay ee maaliyadeed iyo muuqaalada hawlwadeenada Jabbaan ayaa wali ku sugan isgoys, iyagoo aan ogeyn sida "loogu dhawaado" dhagaystayaasha maxalliga ah, taas oo aad u kala duwan dhanka galbeed.
Waxaa la ogyahay in berrinka casino-ka khadka tooska ah ee Jabbaan uusan sahlaneyn inaad khibrad hesho. Hawlwadeennadii ku guuleystey inay maareeyaan suuqa maxalliga ah way xiran yihiin. Japan gudaheeda, majiraan u janjeera in shir lagu qabto mowduucan, arin ama hagitaano lagu sameeyo iskaashi firfircoon xagga isdhaafsiga khibrada.
1. Goobta casino, marka lagu daro cayaaraha, waa inuu jiraa bog macluumaad oo leh maqaallo xiiso leh iyo karti. Isticmaaluhu waa inuu aqbalaa naadiga internetka oo ah goob aad ku qaadan karto waqtigaaga adigoon xitaa ciyaarin.
4. Ha yareyn xayeysiinta. Waxaad tusaale ahaan, tixraaci kartaa dirista casumaadaha goobta.
6. Waa lagama maarmaan in la meeleeyo nidaamyada macluumaadka ee lagu isticmaalo naadiga, iyadoo la raacayo hagitaan talaabo talaabo ah (doorbidayaa fiidiyow) sida loo isticmaalo. Runtii, inbadan oo reer Jabaan ah ayaan aqoon u lahayn nidaamyada lacag bixinta ee caanka ah, sida «PayPall» iyo «NETELLER».
7. Waa lagama maarmaan in laga takhaluso adeegsiga xuruufta Laatiinka, guud ahaanna la isku dayo in lagu muujiyo fikradaha naadiga khadka tooska ah ee fikradaha dhaqanka Japan iyo buugaagta.
Ka dib toddoba qawaani Yuiga Sano , waxaad ku guuleysan kartaa guusha hawshaas adag sida abuuritaanka casino-ka online-ka ah ee Jabbaan. Suuqayaga gudaha ee naadiga noocaas ah, maahan wax adag in kor loo qaado. Si kastaba ha noqotee, hawlwadeennada Ruushka ee casinos-yada dalxiis sidoo kale waxay leeyihiin sirtooda guusha. Bogga http://777vulkan-kazino.com/vulkan-udachi wuxuu booqan karaa mid ka mid ah naadiyada ciyaaraha internetka ee Ruushka tusaale ahaan, oo hubi inta jeer ee layaab ah ee abaabulayaashu u diyaariyeen adeegsadayaashooda. Ago imago
Sida ugu dhakhsaha badan laba bilood ka hor, ajendaha ajandaha ee dawladda Japan waxaa helay su'aal ku saabsan sharci-darrada casinos online ee Japan . Waaxda La Dagaalanka Dambiyada Abaabulan ee dalka ayaa si dhab ah u fulisay arrintaan umuuqatay mid yar. Waxay noqotay, natiijo ka timid dhaqdhaqaaqyada sida umuuqda kuwa yar yar, madadaalo, khasnadda Jabbaan ee lagu bixinayo lacag aad u tiro badan.
Marka ay dusha sare ku soo rogtay qadar daba-gala oo sharci darro ah Ganacsiga khamaarka Internetka ee Japan , Waxaa la go'aamiyay in si deg deg ah loo abaabulo koox gaar ah oo gaar ah oo wax ka qaban doonta gaar u soo bandhigida casinos sharci-darrada ah ee sharci-darrada ah. Waxaa ka mid ahaa dad si gaar ah u tababaran, oo ku saleysan waaxda Japan ee la dagaallanka dambiyada abaabulan.
Kaliya gacanta arrinta, khubarada isla markiiba waxay ogaadeen in ay la soo gudboonaatay dhibaato aad uga weyn tan ay u muuqan karto markii hore. Xididdada ganacsiga khamaarka sharci darrada ah ee internetka ayaa aad u qoto dheer, oo ku lug lahaanshaha xadgudubyada waxay ahaayeen dad badan oo saameyn leh, oo ay ku jiraan saraakiil iyo siyaasiyiin. Qeybaha sare ee mas'uuliyiinta Japan waxay ahaayeen "saqafkan" khamaarka internetka laga mamnuucay. Tani waxay si weyn u murugtay shaqadii kooxdii gaarka ahayd ee ay niyad jabisay markan arrimuhu. Hadda hawsha baarayaasha waa inay soo bandhigaan dambiilayaasha darajo aad u sarreeya leh.
Waa maxay xiisaha, caawimaad firfircoon ee baaritaanka kuwa ka shaqeeya jasiiradaha casriga ee sharciga ah ee Japan , oo ku hoos jira magacyo kala duwan oo jira qaab goobo gaar ah oo lagu ciyaaro. Madaxa kooxda khaaska ah wuxuu sharxayaa iskaashigan firfircoon ee xaqiiqda ah in suuqa madow ee khamaarka dalwaddu uu xadayo dakhliga ka soo gala asxaabtooda daacadda ah ee sida rasmiga ah u diiwaangashan. Waxa kale oo uu xusay in tabarucayaasha hawlwadeennada sharciga ah ee casinos-ka khadka tooska ah ee internetka intay dhacdooyinka socdaan ay yihiin kuwo qiimo leh oo ay tahay inay si dhab ah uga caawiyaan baaritaanka. Oo naftooda naadi dalwaddii tartamayaasha sharci darrada ah soo bandhigaya ballamo faa'iidooyin halis ah.
2.3 Khamaarista sharciga ah ee Jabbaan - waa Koei kyogi (barafka dadweynaha)
khamaarka casriga ah lacag dhab ah oo aan lahayn gunno gunno ah